कंगना फेरी सुशान्तको मृ’त्‍युको कारणको प्रमाण सहित मिडियामा, यस्तो छ कागजी प्रमाण ! – Jagaran Nepal
कंगना फेरी सुशान्तको मृ’त्‍युको कारणको प्रमाण सहित मिडियामा, यस्तो छ कागजी प्रमाण !
बलिउडका कलाकार सुशान्तसिंह राजपुतले आइतबार मुम्बईको बान्द्रास्थित अपार्टमेन्टमा आ’त्मह’त्या गरे । यद्यपि उनको आ’त्मह’त्याको र’हस्य अझै थाहा भएको छैन ।
बलिउडकी अभिनेत्री कंगना रनावतले इन्स्टाग्राममा भिडियो पोस्ट गर्दै सुशान्तको मृ’त्युको जिम्मेवार बलिउडलाई लगाएकी छिन् । कंगनाले स्प’ष्टरुपमा आत्मह’त्या नभइ ह’त्या भएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले एक पछी अर्को बलिउडलाई झ’ड्का दिने र’हस्य खो’लिरहेकी छिन् ।
कंगनाले भन्छिन्, मुभी मा’फिया पत्रकारका झु’ठो समचारले पनि सुशान्तलाई त्यो बाटोमा जान वा’ध्य गराईयो । उनी अगाडि भन्छिन्, ‘सुशान्तसिंह राजपुतको मृ’त्युले हामीलाई ह’ल्लाएको छ । तर, केही मानिसहरुको दि’माग क’मजोर हुन्छ । उनीहरु डि’प्रेशनमा आउँछन् अनि आ’त्मह’त्या गर्छन् । ’
सुशान्तका मामाले पनि सुशान्तले आ’त्मह’त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘ उनले आ’त्मह’त्या गर्न सक्दैनन् । प्रहरीको यस घ’टनामा जाँच गर्नु पर्दछ । उनको मृ’त्युमा कुनै दा’उपे’च हुन सक्छ । उनकी ह’त्या भएको हो । ’ – एजेन्सी